Dadka qaba Baahiyaha gaarka ah oo dalbanaya in ay helaan Xuquuqdooda Siyaasiga ah – SOMA: Somali Media Association
Duurufaha iyo caqabadaha muda dheer haystay dadka qaba baahiyaha gaar ah ayaa ka hor istaagay in door iyo kaalin muuqato ku yeeshaan dawladnimada iyo mataalada dhanka siyaasada.
Cabdullaahi Yariisow oo kamida dhalinyarada naafada ah una dhaq dhaqaaqa xuquuqdooda ayaa qaba in si cad loo banaystay ku tumashada xaqii ay lahayeen waxa uu sheegay in aan loo ogoleen ka shaqeynta Xafiisyada Dowladda.
Waxa uu tilmaamay in dadka qaba baahiyaha gaarka ah kuwooda waxbartay ay dhowr mar isku dayeen raadinta shaqooyinka dowladda, balse aan lasiin. Cabdullaahi waxa uu SOMA u sheegay in dhibaatada jirta ay tahay in dadkaan laga aaminsan yahay in aanay waxba qaban, balse taas ay xaqiiqda ka fogtahay.
Cabdullaahi waxa uu sheegayaa in xubno ka tirsan Masuuliyiin dowladeed ay ku dhagan yihiin dhisida Hay’adda Naafada Qaranka oo uu Madaxweynuhu saxiixay.
“Wallahi xiligaan kala guurka ah dadka naafada ah waxay wajahayaan iyaga ma aragtay dowladi,madaxweynihe maxamed cabdulaahi farmaajo iyo baarlamaanka tobanaadbo ay u jideeyeen daruuf wax ku ool ah oo loo dhisay xeeriirka naafada qaranka sharcigeedi la dhamaystiray iyo iney fowlada soomaaliya saxiixday, axdiga caalimiga ee qaramada midowe xaquuqda dadka naafada qaybta xaquuqda la siinayo dadka naafada ah,hadana kala guurkuu ayaa waxa uu u dhacaayaa xili waxaas oo dhan dadka naafada ayaan ka faa’ideysanin waxaas oo dhan ay ku maqanyihiin gacmo kaleeto oo ah ee haydaha dowlada,ururada bulashada rayidkaa,beesha caalamkaa,dadka naafada waxyaabaha ay aadka uga caroodaan waxa ay tahay in xukuumadii iyo wasaaradii loo idmay inay dadka naafada la tashato dad naafa ah lasoo xulo inay Soo qortay shan qofood oo naafa ah oo aanan jaamacad kasoo bixin taasoo dadka naafada ah u arkaan quursi ka dhan ah xaqa iyo xaquuqda dadka naafada iyo inay tahay damac guracan oo la doonaayo in dadka naafada xaquuqdooda lagu boobo”.
Cabdullaahi oo dhammeeyey heerka koowaad ee Jaamacadda Saddex sano kahor, kana baxya Kulliyada Maamulka, ayaa isku dayey in uu raadiyo kamid noqoshada Shaqaalaha dowladda dowladda laakiin aysan u suuragalin in uu helo. Isaga oo dalbaday in dadkan loo fududeeyo shaqooyinka.
Faquuqa bulshada dhexdeeda ah ee ay kala kulmaan dadka qaba baahiyaha gaarka ah kuma koobna oo keliya dhibatoyinka ka haysta hannaanka shaqa raadinta, ka dhexmuuqashada shaqaalaha rayidka ah, ee xitaa ma waxaan jirin inta badan Goobaha bulshada isugu timaado iyo Hoteelada aanay lahay Jaranjarooyinka loogu talagalay dadkan.
Gudoomiyaha Golaha Naafada Qaranka Soomaaliyeed Cali Cabdullaahi Salaad ayaa qaba dhibaatooyinka haysta dadka naafada ah in ay qayb ka tahay bulshada oo aaminsan in ay yihiin kuwa aan waxba qabsan karin kana haysta faham qaldan.
Waxa uu sheegayaa xafiisyada Maamul ee dowliga ah iyo kuwa aan dowliga ahayn ay aad ugu yar yihiin dadka Naafada ah, taas oo caqabad weyn ku ah.
Gudoomiye Cali ayaa tilmaamay in aan laga fikirin sidii loo hormarin lahaa dadka baahiyaha gaarka ah qaba oo caqabad weyn xilligaan adag ku jira, isaga oo dalbaday in loo fududeeyo adeegyada ay doonayaan dadkaan oo qaarkood ah kuwa aqoonyahanno ah.
”Daruufaha ugu adag dadka naafada wahahayaan lambar one waxa ay noqoneysaa dadka soomaaliyeed waxa ay ka aaminsanyihiin dadka naafada ah, dad hadey naafo yihiin inay nolosha in ay ka dhaceen laakinse waxaysan ogeen waxa aduunka wax laga qabsado uguma qaymaha badan in ay tahay caqliga iyo maskaxda, dadka naafada ah faham qaldan ayey ka qabaa bulshada soomaaliyeed sidaasi daraadeed waxaa mahuum ah in fahamka qaldan meel la islka dhigo la ogaado maskax iyo caqli laga faa’ideysan karo inuu ku jiro dadka naafada ah, dhibaatada heysata waxaa ka mid ah dadka shaqeya ama public ka shaqeya amaa meelaha publiga ka shaqeya arimaha amaa meelaha dowlada u shaqeeya ama private ka shaqeeya waa dadka naafada boqolkiiba hal ma dhama, ee markii loo hadlaayo iisheegey afrika ay u leeyihiin qaybaha ama waxbarashada ama isbitaalada, hoteelada ama laamiyada ama xafiisyada dowlada ee ma jirto xaafiis suurta galin kara in qofka naafada siduu rabo ugu adeegan karo maadaamaa uu bulshada ka mid yahay”.
Madaxweyne Farmaajo ayaa saxiixay Sharciga Naafada Qaranka 31-bishii December 2018-kii, kaa oo difaacaya Xaquuqda ay leeyihiin, sidoo kalana uu Sharciga xambaarsan yahay in la daryeelo dadka Soomaaliyeed ee tabaaleysan, gaar ahaan naafada.
Xildhibaan Maxamad Cumar Dalxa oo kamida Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegaya in Xildhibaan ahaan labada Aqal ay guteen waajibkii ka saarnaa Sharciga Naafada Qaranka, balse la doonayo in dhaqan galintiisa ay la socoto Hay’adda Fulinta, maadaama ay awoodeeda leedahay.
Xildhibaanku waxa uu tilmaamay in muhiim ay tahay in dadka naafada ah laga qeyb geliyo siyaasada dalka, isaga oo aaminsan in ay ka waxqabad badanyihiin kuwa qaar kamida dadka lixaadkoodu dhanyahay.
“Taasi fulintaa is kaleh anaga waajibkii naga saaran baarlamaan waa gudanay waa Soo ansixinay, madaxweynuhuna dee sidee looga baahnaa isagan dikireetadii sharciiyan inuu isga Soo saxiixo laga rabay wuu Soo saxiixay taa inaad xukuumada weydiisaan wasiirad iyo inta kale ee iyaga shaqadaasi iskaleh, sababtoo ah waxii ayaga ay ka tabanayaan ee naafada inii la weydiiyo la yiraahdo maxaa caqabada idiin hortaagan? maxaase howshaa saa iyo saaa la idinka sugaaye aad uqaban weydeen? markaa taa xukuumada in laga xisaabtamey ku fiicantahay”.
Madaxweynahay Soomaaliya ayaa amray Labada sano kahor bishaan oo kale in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhiso hay’adda Naafada Qaramka, oo uu faray in si fiican loo qalabeeyo, loona magacaabo madax ka tirsan Naafada oo aqoon, xirfad iyo karti u leh firfircooni gelinta hay’addaas. Waxa uu sheegay iney xilligaas dowladdiisu dareenkeeda u jeeddo caawinta naafada, inkastoo aan wali lahaynin dhaqan galka arrintaas.
WQ: Fartuun Ahmed oo ka tirsan Star FM